NADP disodium ဆား (24292-60-2) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker ကိုဝယ်ပါ
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP +) သည် anabolic တုံ့ပြန်မှုများတွင် cofactor တစ်ခုဖြစ်သည်။ β-Nicotinamide adenine ……
NADP disodium ဆား (24292-60-2) ဗီဒီယို
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ဖော့စဖိတ် disodium ဆား (NADP disodium ဆား) Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် β-Nicotinamide adenine dinucleotide ဖော့စဖိတ် disodium ဆား (NADP disodium ဆား)
ဓာတုအမည် NADP Disodium; Nadide ဖော့စဖိတ် disodium; NADP; β-NADP; Triphosphopyridine ဘေ့ disodium ဆား;
CAS အရေအတွက် 24292-60-2
အရည်ပျော်မှတ် 175-178 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေ ပျော်ဝင် > 50 ဂရမ် / L
လြှောကျလှာ အေရိုးဗစ်နှင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေဓာတ်တိုးခြင်းများတွင် Coenzyme
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ဖော့စဖိတ် disodium ဆား (NADP disodium ဆား) ဆိုတာဘာလဲ။
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP +) သည် anabolic တုံ့ပြန်မှုများတွင် cofactor တစ်ခုဖြစ်သည်။ β-Nicotinamide adenine dinucleotide ဖော့စဖိတ် disodium ဆားသည် NADP + ၏ disodium ဆားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရက်ကိုဂလူးကို့စ်အချဉ်ဖောက်ခြင်းနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများ၏အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်းများအတွက်လိုအပ်သော coenzyme တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်ရှိတစ်သျှူးများ၊ အထူးသဖြင့်အသည်းများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) နဲ့ NADPH ဟာ redox pair တစုံကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ NADPH / NADP အချိုးသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အထူးသဖြင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေရှိသောတုံ့ပြန်မှုအတွင်းရှိဆဲလ်များ redox အလားအလာကိုထိန်းညှိပေးသည်။ ဥပမာ lipid နှင့် nucleic acid ကိုပေါင်းစပ်ဖြစ်ကြသည်။ NADP သည်အမျိုးမျိုးသော cytochrome P450 စနစ်များနှင့် thioredoxin reductase / thioredoxin system ကဲ့သို့သော oxidase / reductase တုံ့ပြန်မှုစနစ်များတွင် coenzyme pair ဖြစ်သည်။
NADPH သည် biosynthetic ဓာတ်ပြုမှုများအတွက်ညီမျှမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ် (ROS) ၏အဆိပ်အတောက်ကိုကာကွယ်ရန် redox effect များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ glutathione (GSH) ကိုအသစ်ပြန်ထုတ်သည်။ ၎င်းကိုကိုလက်စထရောပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် fatty acids Chain extension ကဲ့သို့သော anabolic လမ်းကြောင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင် NADPH စနစ်သည် NADPH oxidase မှတဆင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆဲလ်များတွင်အခမဲ့အစွန်းရောက်များထုတ်လုပ်ရန်လည်းတာဝန်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအခမဲ့အစွန်းရောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပေါက်ကွဲမှုလို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရောဂါပိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည်အရင်းအမြစ် cytochrome P450 hydroxylated မွှေးကြိုင်သော၊ စတီရွိုက်၊ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတို့၏လျှော့ချညီမျှသည်။
လြှောကျလှာ β-Nicotinamide adenine dinucleotide ဖော့စဖိတ် disodium ဆား၏
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) နဲ့ NADPH ဟာ redox pair တစုံကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ NADP / NADPH သည်အက်စစ်အီလက်ထရွန်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတစ်ဆင့် redox တုံ့ပြန်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည့် coenzyme တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် lipid နှင့် nucleic acid synthetic စသည့် anaerobic response များ။ NADP / NADPH သည်အမျိုးမျိုးသော cytochrome P450 စနစ်များနှင့် thioredoxin reductase / thioredoxin system ကဲ့သို့သော oxidase / reductase တုံ့ပြန်မှုစနစ်များတွင် coenzyme စုံတွဲဖြစ်သည်။
NADP ကို ​​coenzyme အဖြစ်အသုံးပြုသောအခြားအင်ဇိုင်းများမှာ - အရက် dehydrogenase: NADP မှီခိုခြင်း၊ မွှေးကြိုင်သော ADH: NADP မှီခို; Ferredoxin-NADP reductase; L-Fucose dehydrogenase; ဒေတာဘေ့စ; Galactose-1-phosphate uridyl transferase; ဂလူးကို့စ dehydrogenase; L-glutamic dehydrogenase; Glycerol dehydrogenase: တိကျတဲ့ NADP၊ Isocitric dehydrogenase; Malic အင်ဇိုင်းတွေ; 5,10-Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase; 6-Phosphogluconate dehydrogenase နှင့် Succinic semialdehyde dehydrogenase ။
Hashida SN, Kawai-Yamada အမ် Inter-Organelle NAD အပင်များ၌အလင်းတုံ့ပြန်မှု NADP ဒိုင်းနမစ်ကိုအခြေခံသည်။ ရှေ့စက်ရုံသိပ္ပံ။ 2019 ဇူလိုင်လ 26; 10: 960 ။ Doi: 10.3389 / fpls.2019.00960 ။ eCollection 2019. PMID: 31404160. PMCID: PMC6676473
တီက U၊ Vlach J၊ Garza-Garcia A၊ William D၊ Danilchanka O၊ de Carvalho LPS၊ Saad JS, Niederweis အမ်။ 2019 မတ်လ 1; 294 (9): 3024-3036 ။ Doi: 10.1074 / jbc.RA118.005832 ။ Epub 2018 ဒီဇင်ဘာ 28 PMID: 30593509. PMCID: PMC6398120 ။
Liang J၊ Huang H၊ ဝမ်အက်စ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းနှင့်ဖလိုဗင်အခြေပြုအီလက်ထရွန် - အသည်းကွဲစေသော NADH - မှီခိုအားထားသည့် Ferredoxin ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်များ - NADP + Oxidoreductase ။ ရှေ့ Microbiol ။ 2019 မတ်လ 1; 10: 373 ။ Doi: 10.3389 / fmicb.2019.00373 ။ eCollection 2019. PMID: 30881354. PMCID: PMC6405883 ။
Kawai S၊ Murata K. “ NAD kinase နှင့် NADP phosphatase ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်။ NAD (H) နှင့် NADP (H) ၏ဆဲလ်မျှတမှုကိုထိန်းညှိသောအဓိကအင်ဇိုင်းများ” ။ ဇီဝသိပ္ပံ, ဇီဝနည်းပညာနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒ။ 72 (4): 919-30 ။ Doi: 10.1271 / bbb.70738 ။ PMID 18391451 ။
Hanukoglu ဗြဲ“ FAD နှင့် NADP မှစည်းနှောင်ထားသော Adrenodoxin Reductase-A နေရာအနှံ့အင်ဇိုင်းရှိအင်ဇိုင်း - ကိုနင်အဆိပ်အတောက်ထိန်းသိမ်းမှုများထိန်းသိမ်းခြင်း” ။ မော်လီကျူးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ဂျာနယ်။ 85 (5-6): 205-218 ။ Bibcode: 2017JMolE..85..205H ။ Doi: 10.1007 / s00239-017-9821-9.PMID 29177972 ။